कहाँ कहाँ छ आज ठूलो वर्षा ? महाशाखाले भन्यो सचेत रहनुहोस् – Sapana Sanjal
कहाँ कहाँ छ आज ठूलो वर्षा ? महाशाखाले भन्यो सचेत रहनुहोस्
July 8, 2021 232
Sapana Sanjal : काठमाण्डौ । विहिवार पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुने अनुमान छ । काठमाडौ लगायत केही क्षेत्रमा विहिवार विहानै देखि वर्षा सुरु भइरकेको छ । वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश(१ का केही ठाउँमा ठूलो वर्षा भैरहेको मौसमविद्ले जनाएका छन् । यी प्रदेशका धेरै ठाउँमा हिजोदेखि नै पानी परिरहेको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका केही ठाउँमा पनि राति ठूलो पानी परेको थियो भने केही ठाउँमा हल्का मात्रै पानी परेको मौसमविद्ले बताएका छन् ।
लगातार पानी परेसँगै विभिन्न नदी, खोलाहरुमा बाढी आएको छ । नारायणी र यसका सहायक नदीहरुमा रातिदेखि नै पानीको बहाव बढ्दै गएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै बुढीगण्डकी, त्रिशूली, वाग्मती, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी, सुनकोशी, तामाकोशी, भोटेकोशी, दूधकोशी, अरुण, तमोर, तिनाउ, कन्काई, कमला लगायतका नदी खोलाहरुमा पनि पानीको बहाव बढेको छ ।
नदी, खोला आसपासमा सावधानी अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । आज वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश(१ का केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविद् मिनकुमार अर्यालले बताए । यस्तै आज कर्णाली प्रदेशमा पनि हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षा हुने सम्भावना छ ।
लगातारको झरीसँगै देशका धेरै नदी तथा खोलामा बाढी आएको छ । यस्तै आज राति वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश(१ सँगै प्रदेश नम्बर २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसमविद् मिनकुमार अर्यालले बताए । हिजो र आज लगातार झरी परे पनि भोलि केही मौसम खुल्ने मौसमविद् अर्यालले बताउनुभयो । भोलिदेखि लगातार झरी पर्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाई छ ।
Prevसुजिता भण्डारीको शव पहिलो पटक देख्ने युबक भन्छन्: च्याउ खोज्न जंगल गएको थिए कता कता नजिकै बाट नमिठो गन्ध आयो त्यसपछि ….
Nextपत्‍नीका सात प्रकार; तपाईँ/तपाईँकी पत्‍नी कस्ती ?
बच्चा भएका महिलाहरु लाई विदेश जानका लागि नयाँ नियम लागु !
पसलमा गएको यो बाँदरले धमाधम र क्सी को बोतल खोल्दै आफै पिएपछी….
सुनसरीको भाण्टाबारीमा तीव्र गतिको हायसले मोटरसाइकल र पिकअपलाई ठक्कर : ३ जनाको मृत्यु, २ जना घाइते